Akhriso Liiska Dadka Amiirka Al-Shabaab Uu Dilay, Kuwa U Xidhan Iyo Kuwa Uu Ku Raad Joogo Wakhtigan | Salaan Media
Home Wararka Akhriso Liiska Dadka Amiirka Al-Shabaab Uu Dilay, Kuwa U Xidhan Iyo Kuwa...
Akhriso Liiska Dadka Amiirka Al-Shabaab Uu Dilay, Kuwa U Xidhan Iyo Kuwa Uu Ku Raad Joogo Wakhtigan
July 29, 2013 London(SM) – Waxaa mar kale lagu faafiyeyhttp://shabakataljahad.com/vb/ oo ah bar internet ah oo taageerta urur weynaha Al-qaacida laguna qoro qoraalo iyo warar lagu taageerayo Ururka Al-qaacid qoraal uu qoray Abuu Yuusuf isagoo warqadaan u qoray Amiirka Ururka Al-shabaab axmed Cabdi Godane.
Waxaa xusid mudan in Bartaan Internetka horay loogu faafiyey qoraalo, Fataawaad Cabashooyin, waraysiyo ay bixiyeen masuulyiin ka tirsan ururka Al-shabaab kana soo horjeeda Hogaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane.
Ragga Qoraalada ku faafiyey Bartaan Internetka ayaa waxaa ka mid ah Ibraahim Xaaji Jaamac Miicaad Ibrahim Afgaani, Sh Xassan Daahir Aweys, Zubeyr Muhaajir, Abuu Yuusuf, Abu Mansuur Al-amriiki, iyo qaar kale.
Abu Yuusuf ayaa qoraalkiisa waxaa uu arar uga dhigtay in u jeedadda uu qoraalkaan ugu qorayo Hogaamiyahah Al-shabaab Axmed Cabdi Godane ay tahay ka dib markii uu uu ka leexday Manhajkii saxda ahaa, kuna dhacay xadgudub diineed oo ay ugu horayso banaysiga dhiiga dad Islaamka iyo ka fogaanshaha ku dhaqan ka shareecadda islaamka.
Abu Yuusuf ayaa waxaa kale oo uu ku eedeeyey hogaamiyaha Al-shabaab in uu yahay mid hawadiisa ku socda, diidayna in lagu kala baxo shareecad Islaamka iyo in uu raaco go,aankii Maxkamada Islaami ah ee ururka Al-shabaab, waxaa kale oo uu ku eedeeyey in uu diiday wadatashiga iyo in Khilaafka ka dhex aloosan ururka Al-shabaab dhexdiisa lagu xaliya Maxkamada Islaamiga ee ururka isagoo intaas ku daray in uu xiray garsoorihii Maxkamada Islaamiga ee ururka Al-shabaab.
Abu Yuusuf ayaa waxaa sidoo kale uu ku eedeyeey hogaamiyaha ururka Al-shabaab Axmed Godane in uu banaystay dhiiga dadka Muslimiinta ah gaar ahaan Mujaahidiinta oo uu u kala qaybiyey kuwo Ansaaar ah iyo Muhaajiriin ah ayna ugu xiran yihiin Xabsiyo halka buu yiri Muhaajiriinta oo ah xooggga ka dhinac dagaalama Al-shabaabna uu u gacan geliyey Gaalo, halka qaar kale oo ka qayb qaadan lahaa Jihaadka ka socda Soomaaliya loo diiday in ay yimaadaan dalka Soomaaliya.
Abu Yuusuf ayaa waxaa uu dusha uga tuuray Hogaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane in madaxda muhaajidiinta iyo culimaduba uu ka fogeeyey hogaanka, uuna u diiday xuquuqda ay lahaayeen gaar ahaan marka la qaybsanyo “Ganaa’imta” iska daa in wax la taree lagu weeraro Bam gacmeedyo Masaajidda Alle sidda ka dhacday magaalada Muqdisho.
Abuu Yuusuf ayaa ku tilmaamay in hogaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane uu kooxdiisa ka dhiga jamaacaddii Muslimiinta ee aan qofna khilaafi karin cidii khilaaftan ay mudanayso dil .Abuu Yuusuf ayaa xusay in kooxda Al-shabaab ay hadda tahay mid u gacan gashay Ina Godane oo uu siddii uu doono uu ka yeelo qofkii uu rabo uu dilo kii uu rabna uu xiro ama iska daayo.
Abuu Yuusuf oo ka sheekeynaya qaabkii Axmed Godane u dilay Ibraahim Afgaani iyo Macalin Burhaan
Abuu Yuusuf ayaa qoraalkiisa waxaa uu uga sheekeeyey qaabkii loo dilay Ibraahim Xaaji Miicaad Ibraahim Afgani iyo Macalin Burhaan ka dib isku daygii dilka ahaa ee uu ka badbaaday Abu Mansuur Al-Amriiki oo hogaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane uu u diray ciidankiisa amniyaadka si ay u soo qabtaan ama u dilaan balse Abu Mansuur Al-amriiki ayaa is difaacay kana fakaday shirqoolkaas Xili uu ku sugnaa degaanka Raama Caddey.
Abuu Yuusuf ayaa qoraalkii ku sheegay in 10-kii bishii Shacbaan 1434 maalin Isniin xili salaadii Maqrib la tukaday oo uu Ibraahim Xaaji Miicaad Afgaani ka soo baxay goob uu ku sugnaa oo ku taal degmada Baraawe uuna soo aaday balan uu la lahaa rag ka tirsan ururka Al-shabaab ka dibna ciidan ka tirsan Amniyaadka oo ka amar qaata hogaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane ayaa rasaas la dhaceen ilaa uu naf baxay xili uu ku qaylinayey ‘’Walaahi idinku waxaa tihiin Daalimiin.’’
Abuu Yuusuf ayaa ka sheekeeyey wax dhacay markii la dilay Ibraahim Afgan waxaa uu yiri ‘’ Mid ka mid ah saaxiibada Ibraahim Afgaani ayaa waxaa uu wacay saaxiibkiisa waxaa uu u sheegay in qof la dilay laguna dilay meel u dhow gurigii uu deganaa Ibraahim Afgaani ka dibna wiilkii ayaa waxaa uu si toos ah u wacay Teleefankii Ibraahim Afgani waxaa ka qabtay mid ka mid ah ciidanka Amniyaadka dhowr jeer, markaas oo uu gartay in qofka la dilay uu yahay Ibraahim afgani.
Wiilkii ayaa waxaa uu wacay Xikmatyaar [waxaa uu u xiran yahay hadda ururka al-shabaab] waxaan uu wiidiyey Ibraahim Afgani waxaa uu ku yiri ma ogi ka dibna waxaa magaalada Baraawe ku faafay warkii in la dilay Ibraahim Afgaani ka dibna hogaamiyaha Al-shabaab waxaa uu hawada ka saaray is gaarsiintii degmada Baraawe.
Abuu Yuusuf oo qoraalkiisa sii wata ayaa yiri ”Dilka ka dib ayaa waxaa uu Hogaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane uu soo geliyey degmada Baraawe ciidan gaaray ilaa 800 waxaa ay bilaabeen howl galo ay ku qabanayaan qof walba oo taageersanaa Ibraahim Afgaani ama ka soo horjeeday Hogaamiyaha ururka Al-shabaab”.
Abuu Yuusuf ayaa waxaa kale oo qoraalkiisa uu ku sheegay qaabka loo dilay Cabdi xamiid Macalin Xaashi Colhaye loona yaqaan Macalin Burhaan waxaan uu yiri ” Sh Macalin Burhaan waxaa laga soo qabtay gurigiisa ka dibna waxaa toogtay ciidanka amniyaadka ee ka amar qaata Axmed Cabdi Godane.”
Abu Yuusuf oo ka sheekaynay wax dhacay markii la dilay Ibraahim Afgani iyo Macalin Burhaan
Markii uu soo baxay warka in la dilay Macalin Burhaan iyo Ibraahim Afgaani ayaa waxaa kooxda Axmed Cabdi Godane sidda caadiga u ah waxaa ay faafiyeen been ah in aan Ibraahim Afgaani aan la dilin ee uu xiran yahay iyagoo ka baqay haddii ay ciidanku ogaadaan dilka Ibraahim Afgani in ay gadoodaan.
Maalmo ka dib ayaa Afhayeenka dhinac howlka ee Al-shabaab Cabdicasiis Abu Muscab waxaa uu sheegay in Ibraahim afgani iyo Macalin Burhaan ay la dagaalameen ciidanka Al-shabaab ka dibna ay saas ku dhinteen ka dib markii ay diideen in ay isku dhiibaan ciidanka , haddaba Abu Yuusuf ayaa waxaa uu is wiidiyey haddii labada wadaad ee la dilay ay dagaalameen aaway ciidanka ka dhaawacmay ama ka dhintay ururka Al-shabaab.?
Abuu Yuusuf ayaa ku tilmaamay hadalada uu mariyey saxaafadda Afhayeenka ururka Al-shabaab Cabdicasiis Abu Muscab mid been abuur ah isagoo weliba xusay in Cabdicasiis Abu Muscab uu ahaa ninkii ka soo cararay dagaalkii ka dhacay Gobolka Galgaduud ee Bartamaha dalka Soomaaliya.
Abu Yuusuf oo ka sheekaynay dadka ilaa hadda u xidhan Hogaamiyaha ururka Al-shabaab Axmed Cabdi Godane:
1. Xikmatyaar oo ahaa ninkii dhalinyarad ahaa ee ku baray hogaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane Mucaskarkii Salaaxudiin sidda Qoriga Ak-47 ah loo furfuro.
2. Cabdi Rabi Daxdaax oo ahaa Khadhiib isagoo Masjid ku yaal Baraawe ka sheegay in xaqa loo noqdo oo khilaafka ka dhex jira ururka Al-shabaab lagu xaliya Kitaabka Alle.
3. Zubayr Muhaajiri oo ahaa Madaxii Garsoorka Maxkmada ururka Al-shabaab waxaa uu ka yimid dal ka mid ah reer Galbeedka.
4. Macalin Xamzah oo ahaa mid Xifdisan Quraanka kariimka habeenkii la dilay Ibraahim Afgani baa lagu amray in uu u yimaado ciidanka Xizbada ka dibna waa la xiray.
5. Abu Khubayr Al-Anzaari oo ka yimid dal Carabeed.
6. Muhaajir Farance waa nin ka yimid faransiiska magaciisana aan aqoon.
7. Cabdirizaaq u socday reerkiisa oo degan Gobolka Bay.
8. Sh Cabdirashiid Abu Yoonis Wuxuu masuul ka ahaa dhinac Dacwada gobolka Banaadir.
9. Sufyaan waxaa uu ka shaqayn jiray qaybta siyaasada waxaa ay qaraabo yihiin Madaxweynaha Puntlland Faroole.
10. Mukhtaar Qani oo uu ahaa masuul ciidan ahna Muhaajir waa la xiray ka dib markii lagu eedeeyey in uu magan geliyey ,Abuu Mansuur Al-Amriiki, Khadhaab Masri, Usaama Biridhaani.
11. Abu Dalxa Soomaali loona yaqaan Samatar ka yimid dalka Maraykanka.
Abu Yuusuf oo ka sheekaynay dadka hogaamiyaha ururka Al-shabaab Ina Godane aan weli u gacan gelin balse lagu daba jiro waxaa ka mid ah:
1. Sh Mukhtaar Roobow Abu Mansuur waxaan loo khiyaar geliyey in uu kala doorto saddex arrimood oo kala ah.
A) In uu howsha ururka soo galo balse uusan ka hadal waxba
B) In uu marayo halkii uu maray Ibraahim afgani oo ah dil
C) In uu ku sugnaado gurigiisa oo uu aamuso
2. Sh Xassan Daahir Aweys oo ahaa aabaha mujaahidiinta Somaaliya ahna masuul sare oo ka mid ah ururka Al-shabaab madaxna u ahaa ururkii Xisbul islaam oo isago habeen madow si qorsoodi ah uga baxay degmada Baraawe ka dib markii uu u adkeysan waayey Dulmiga Axmed Godane iyadoo markuu uu Sh Xassan daahir Aweys u gacan galay Dowllada Federaalka uu Ina Godane ku eedeeyey in uu yahay mid yoolkii Jihaadka luminaya ama khaldaya xiriirna la sameeyey sirdoonka Dowldda Federaalka taas oo ah dulmi iyo mid cadaalada ka fog.
3. Cabdifitaax Maxamed oo ahaa Kalkaaliyihii Sh Xassan Daahir Aweys oo hadda ku xiran xarunta Nabadsugida ee Dowllada Federaalka ee Soomaaliya
4. Sh Abuu Yaasir Al- Maqdisi oo ka badbaaday shirqoolkii lagu dilay Sh Abuu Camaarah iyo 8 xubnood oo kale
5. Abu Mansuur Al-amriiki oo ahaa masuulkii ciidanka Gobolka Banaadir iyo Bay iyo Bakool marna noqday ku xigeenka golaha Shuurada ee ururka Al-shbaab oo isagu ka badbaaday isku daygii lagu dili lahaa xili uu ku suganaa degaanka Raamacadey.
6. Khadhaab Masri noqday masuul ciidan ee Gobolka banaadir.
7. Usaama Biridhaani loona yaqaan Usaama Bakistaani waxaa uu dalka Soomaaliya yimid xiligii Maxaakimta.
8. Zakariye Ismail loona yaqaan Zaki waxaa uu saaxiib la haa hogaamiyaha Al-shabaab Axmed Cabdi Godane ayaamihii uu joogay Bakistaan waxaan uu ka yimd dalka Swedan, waxaa uu masuul ka ahaa Xabsiyadda ururka Al-shabaab. Zakariye Ismail waxaa lacag dhan 3 milyan oo dollar ku raadinay dowllada Maraykanka.
9. Cumar Maxamed Abu Ayaan ka yimid dalka Swedan waqtigii Maxaakimta waxaa uu saaxiib dhow la ahaa Ibraahim Afgani.
Abu Yuusuf oo ka sheekaynay dadka Muhaajiriin ah oo laga saaray dalka Soomaaliya una gacan galay ciidanka kenya.
Abuu Yuusuf ayaa isagoo sii wata qoraalkiisa waxaa uu ka sheekeeyey rag Muhaajiriin ah oo intii ay qabteen ciidanka ka amarqaata Axmed Godane ay qasab uga saareen xuduuda Soomaaliya ka dibna qaar la qabtay halka kuwa kalena ay si dhuumasho ugu soo laabteen xadka Soomaaliya.
Dadka Abuu Yuusuf xusay in Xadka la geeyey ka dibna si dhuumasho ku soo laabtay ayaa waxaa ka mid ah Xakiim Masri halka Cadhalaahu Turki iyo usaama Shaami ay u gacan galeen ciidanka dalka Kenya.
Abuu Yuusuf ayaa is wiidiiyey sababta uu Barre Aadan Shire Hiiraale iyo ciidan la socda oo dagaal looga soo saaray magaalada Kismaayo ay hadda u joogaan degaano ay ka taliyaan Al-shabaab oo dhaawacoodu yaal oo uu weliba Barre Hiiraale ka sheegay Idaacaddaha in ciidankiisa iyo kan ururka Al-shabaab ay dagaal kula jiraa hal cadow arrinkaas oo hogaamiyaha ururka Al-shabaa Axmed Godane uu arkayo maqlayana.
Abuu Yuusuf ayaa qoraalkiisa waxaa uu ku xusay in Xassaan Xuseen Aadam uu dhexdabaashay Khaladaadka jira isagoo fatwooday in ciddii wax ku khilaafta Hogaamiyaha Al-shabaab Axmed Godane uu mudan yahay dil . Abu Yuusuf ayaa waxaa uu ku Shabahay Xassaan Xuseen Aadam, Sh Abu qataad Al-Falastiini oo isagu fatwooyin Khaldan bixiyey xiligii dagaaladu ay ka socdeen dalka Jazaair.
Dhinac kale Abuu Yuusf ayaa ku sheegay qoraalkiisa in qof uu la hadlay uu u sheegay in Xassaan uusan fatwooni in qofkii Khilaaf Axmed Godane la dilo ayna jirto in qoraal loogu tacsiyey nayo Ibraahim Afgani iyo Macalin Burhaan lagu soo daabacay webka gaar uu u leeyahay Xassaan Xuseen balse uu sheegay in uusan qoraalka wax war ah u hayn Abuu Yuusuf oo qoraalkiisa sii wada ayaa yiri ”Waxaa u sheegayaa Xassaan Xuseen in arrinka ah in uusan Fatwoon in la laayo kuwa khilaafa Axmed Godane aysan waxba u taraynin ilaa uu ka bari noqonayo kuwa dilay Ibraahim Afgani iyo Macalin Burhaan.”
Ugu dan bayntii ayaa waxaa Abuu Yuusuf uu qoraalkiisa kaga sheekeeyey Taariikhda Ibraahim Afgani iyo Macalin Burhaan iyo wax ay qabteen waxaa kale oo uu soo hadal qaaday saxaafada Ururka Al-shabaab gaar ahaan Radio Furqaan iyo Idaacadda Al-andulus oo dhamaantood ku hadal afka Al-shabaab.